I-Amethystum ibonisa iSeva yayo ekhethekileyo yeNgqondo yoSapho yokuGcinwa kweLifu yeFotoegg kwiShenzhen Gift Fair
I-Shenzhen Gifts Fair ibanjelwe i-29 ukususela oko yasekwa ngo-1993, yaphumelela isiqinisekiso se-UFI (i-Global Exhibition Industry Association) ngo-2005, kwaye yaziwa ngokuba yi-"China Gifts and Home Furnishing Flagship Exhibition". Njengomda omkhulu nowongamileyo wokurhweba ngezipho kunye ...
I-Amethystum Storage yanikela ngesigidi esi-1 se-yuan yezixhobo zokugcina ukukhanya kwiSibhedlele esiPhakathi sase-Wuhan
Kutshanje, i-Amethystum Storage inikezele ngemveliso ye-ZL2520 exabisa i-yuan yezigidi ezisisi-1.3 kwiSibhedlele esiPhakathi saseWuhan kwiPhondo laseHubei. Inkqubo iya kugcina idatha yomfanekiso wezonyango kunye nedatha yokugcina idatha ixesha elide, ukubonelela ngoncedo esibhedlele ngokusebenzisa iteknoloji yokugcina optical. Kuyaqondwa ukuba uAmet ...
I-Amethystum yokugcina umthamo omkhulu we-Blu-ray disc iqinisekiswa yi-BDA(i-Blu-ray Disc Association)
Ngomhla we-9 kaJulayi, i-2021, i-Guangdong Amethystum Information Storage Technology Co., Ltd. (i-Amethystum Storage) ye-Blu-ray Disc enkulu (BD-R TL) iphumelele isiqinisekiso se-Blu-Ray Disc Association/BDA, ephawula i-Amethystum Storage. wenze inkqubela phambili enkulu ekuveliseni i-cap-cap...
Kudlule ngamxhelo mnye! I-Amethystum Storage ivunyiwe njengelungu le-ECMA
NgoJuni 22, 2021, kwintlanganiso yonyaka ye-ECMA eGeneva, iGuangdong Amethystum Information Storage Technology Co., Ltd. yaba lilungu le-SME lombutho ngokuvota. I-ECMA (iEuropean Computer Manufacturers Association) liqumrhu lemigangatho yolwazi kunye nemigangatho yonxibelelwano ngomnxeba...
Ukwenza iimveliso ezintsha ngetekhnoloji engundoqo ezimeleyo, i-Amethystum Storage iphumelele iimbasa ezimbini “kuLuhlu olugunyazisiweyo lweMarike ye-IT ka-2021”
ngu admin on 21-09-05
Nge-20 kaMeyi, 2021, "iNkomfa yoNyaka ye-IT ye-IT" yabanjwa ngokumangalisayo eBeijing. Kule nkomfa, i-Amethystum Storage iphumelele ingqalelo yeendwendwe ngetekhnoloji engundoqo ezimeleyo kwaye elawulekayo yekhonkco leshishini lonke kunye nepro...